RASMI: Mid ka mid ah Weeraryahannada waa weyn ee Kooxda Liverpool oo uu haleelay Korona Fayras – Gool FM
RASMI: Mid ka mid ah Weeraryahannada waa weyn ee Kooxda Liverpool oo uu haleelay Korona Fayras
Haaruun October 3, 2020
(Liverpool) 03 Okt 2020. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Sadio Mane ayaa laga helay caabuqa Korona Fayras, waxaana uu seegi doonaa kulanka Premier League ee ay Axadda la leeyihiin naadiga Aston Villa.
28-sano jirkaan reer Senegal ayaa noqonaya laacibkii labaad ee ka tirsan Kooxda Liverpool oo muddo kooban ku dhacay Korona Fayras, waxaana sidoo kale uu caabuqan haleelay saxiixa cusub ee kooxdaas Thiago Alcantara.
Alcantara ayaa seegay kulankii Carabao Cup ee ay guuldarrada kala kulmeen Kooxda Arsenal Khamiistii, waxaana labaadan laacib ee Thiago iyo Mane ay seegi doonaan kulankooda soo aaddan ee Premier League oo ay Axadda la leeyihiin Aston Villa.
Kooxda Liverpool waxa ay xaqiijisay in Sadio Mane lagu arkay calaamado muujinaya Korona Fayras, laakiin caafimaadkiisa uu sida kale u wanaagsan yahay, waxaana uu seegi lahaa kulamo dhowr ah marka laga tago kulanka Villa, yeelkeede waxaa la aadayaa fasaxa kulammada heerka caalami ee qarammada.
Magaalada Liverpool ayaa todobadii maalmood ee ugu dambeeyey waxaa la xaqiijiyey in xanuunkan uu haleelay 1306, iyadoo todobaadkii kaas ka horreeyey ay tirada uu xanuunkan ku dhacay ahayd 577.
Chelsea, Man City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Roma & Guud ahaan kulammada maanta iyo caawa laga ciyaarayo horyaallada waa weyn ee qaaradda Yurub
Mid ka mid ah xiddigaha Manchester United oo qarka u saaran inuu ku biiro Kooxda AC Milan